Inobereka - Noti Katsi | Noti Katsi
Pano iwe uchawana imwe rizere runyorwa rweese aripo katsi marudzi. Ziva mavambo, hunhu, kuti zvakauya sei, zvinotarisirwa sei ... uye nezvimwe, zvakawanda pamusoro pechipfuwo chako chaunofarira. Uye zvakare, ichashanda segwara rekusarudza iyo inonyatsoenderana nezvinodiwa uye / kana tsika dzemhuri. Ticharamba tichikuzivisa pamusoro pemarudzi matsva anoonekwa kuitira kuti pasave neanopukunyuka. Nakidzwa nayo.
kubudikidza Monica sanchez inoita 1 gore .
Iyo Bengal katsi kana Bengali katsi inoshamisa furry. Chitarisiko chayo chinoyeuchidza zvikuru ingwe; zvisinei, hatifanire ...
Iyo inoshamisira Highlander katsi
kubudikidza Monica sanchez inoita 2 makore .
Iyo Highlander ibhora rakanaka uye rine rudo rehwa rinokwanisa kukunda mhuri yese mu ...
York Chocolate katsi, iyo furry iyo inoda kuve panther
Kana iwe uchida katsi dzine dema fur uye iwe ungade kuva neayo zvakare ine hura ...
Iyo Russian Blue Cat
Iyo Russian blue katsi iri, pamwe nePezhiya, rudzi rwakanaka kwazvo. Uye handireve zvake zvake ...
Kana iwe uchitsvaga inonakidza uye ine rudo epamba feline iyo iri zvakare yakakura kupfuura yakajairika yeEuropean uye inotaridzika ...
Sangana nekatsi ine rudo Neva Masquerade
Iyo Neva Masquerade katsi ihadzi ine chitarisiko chakapfava uye chinotapira seicho chevaSiberia; kubva…
Mutambi weArabia Mau katsi
Iyo katsi yerudzi rweArabian Mau rudzi rwakanaka furry chizvarwa cheArabhiya iyo, kunyangwe ichigere ...
ChiJapan Bobtail, inoshamwaridzana uye ine rudo kumabvazuva katsi
Kunyangwe zita racho richiita serisinganzwisisike kwauri, zvirokwazvo kana uri fan of kit iwe uchave wakamboona kana kunzwa nezvazvo ...
Javanese, iyo inodakadza kati
Iyo katsi yerudzi rweJavanese imhuka inoshamisa inoshanduka pasina kunetseka kugara mufurati ...
Iyo inodakadza LaPerm kati
Kana iwe uri mumwe wevaya vanofarira kupuruzira katsi ine vhudzi rakamonana, neLaPerm hauzobhowekana, ...
El Abyssinian Iyo ndeimwe yekare kare mhando dzekatsi uye pane kumwe kusava nechokwadi nezvenhoroondo yayo.
Abyssinian akafanana nekitsi mu Yekare Ijipiti sezvakaratidzwa mumifananidzo nezvivezwa. Zita rekuti "Abyssinia" harina hukama nekwakatangira, asi zvinofungidzirwa kuti wekutanga Abyssinia akatengwa kubva Abyssinia.
Kutaurwa kwekutanga kwekatsi yeAbyssinia inowanikwa mubhuku reBritish na Gordon Staples rakaburitswa muna 1874 rakaperekedzwa neruvara lithograph yekatsi yevaAbyssinia yakaiswa kuUK pakupera kwehondo.
Nekudaro, hapana zvinyorwa zvekuti katsi dzakatorwa kubva ku United Kingdom uye kune vamwe nhasi vane maonero ekuti muAbyssinia akagadzirwa kuburikidza nemuchinjikwa wemarudzi akasiyana muUnited Kingdom.
Asi pane zvidzidzo nemageneticist anoratidza kuti mahombekombe eIndian Ocean uye zvikamu zveSoutheast Asia ndidzo nzvimbo dzinogona kutangira katsi yeAbyssinia. Katsi yeAbyssinia yakaunzwa kuNorth America kubva kuUnited Kingdom pakutanga 1900 uye mumakore ekupedzisira 1930 Ivo vakaunzwa kuAmerica kubva kuUK.
Abyssinian ndiye akangwara, akangwarira uye anoshanda, katsi inofarira kuve yakabatikana. Abyssinian anofarira kuve nevanhu, asi akazvimiririra uye anoedza kutonga pamba.
Iye akanaka uye ane mhasuru muviri.
Iine maziso akakura, akaita seamanda, asi nzeve idiki zvishoma pane zvakajairwa.
Savannah katsi, hombe pane zvese
Katsi nhema nhema
Iyo orange tabby kati
Iyo grey katsi
British bicolor katsi, nhema uye chena